Ma iga caawin kartaa inaad fahamto Amazon darajo algorithm?
Amazon darajo algorithm ee raadinta alaabta (sidoo kale loo yaqaan A9) waxaa loogu talagalay in lagu daro alaabooyin kala duwan si marka marka macaamilku raadiyo shey gaar ah oo iibka - natiijooyinka raadinta ee ku habboon ayaa la isku soo jiidayaa waxaana la bixiyaa kaliya laba tallaabo. Si fudud u dhig, marka iibsadaha suurtagal ah in ay raadsadaan raadinta alaabta, Amazon darajo algorithm waxay sameyneysaa sida ugu fiican ee isku dayaysa in ay bixiso natiijooyinka ugu fiican ee iswaafajinaya codsiga macaamiisha. Inkastoo Google uu muujinayo natiijooyinka jawaab bixinta ugu wanaagsan ee ku saabsan su'aalaha raadinta ee user, Amazon darajo algorithm ayaa diiradda saaraya muujinta sida dhabta ah alaabta dukaamadu ay u badan tahay inuu iibsado. Waxaa loola jeedaa in nidaamka lagu daro alaabta Amazon ay tahay mid toos ah, haddii la barbardhigo nidaamka la midka ah ee mootooyinka waaweeyn ee raadinta sida Google laftiisa, iyo sidoo kale Yahoo, Bing, iwm.Calaamadaha ugu muhiimsan ee Amazon Ranking Ranking Algorithm
Guud ahaan, ujeedada ugu muhiimsan ee Amazon rikoodhka algorithm waa in la hubiyo dakhliga ugu badan ee macaamiisha iibsashada ka badan halkaas. Ka mid ah kuwa kale, Amazon raadinta mashiinka raadinta ayaa ku qaylinaya arrimo kala duwan oo gudaha ah. Waxaan ula jeedaa in aysan jirin wax-ka-baxsi-bogga Amazon - waxa si fudud u bixisaa dareenka saamiga libaax ee qaybaha ka baxsan bogga, sida warbaahinta bulshada, dhismaha xidhiidhka, maamulka domain, iyo wixii la mid ah. Sida aan hore u sheegay, yoolka ugu weyn ee Amazon darajo algorithm waa in ay ka helaan ugu badan ee ugu badan dakhliga ee macaamiisha (RPC). Natiijooyinka muhiimka ah ee lagu saleeyay A9 waa sidan soo socota:
Heerka beddelka - guud ahaan wuxuu ku dhaqaaqay dib u eegista macaamiisha, qiimaha tartanka, iyo tayada muuqaalka alaabta.
Ku-qancinta Macaamilka iyo Macaamilka Macaamiisha - iyadoo isbarbardhiga ku haboon ay inta badan go'aamiyaan magaca sheyga iyo sharaxaadda badeecadda, heer wanaagsan oo ku qanacsan macaamilka ayaa sidoo kale laga helaa qodobbada muhiimka ah ee muhiimadda ugu saraysa halkaas.
Dib-u-dhig - Cilaaqaadyadani waxay inta badan ku soo noqdaan heerka ODR (amarka qadarka cilladda), iyo sidoo kale jawaab celinta iibiyaha. Sida laga soo xigtay A9 dakhliga algorithm, faa'idada ugu badan waxaa lagu gaari karaa oo kaliya iyadoo samaysa macaamiil badan oo faraxsan oo ay ku celiyaan si joogta ah inay dib ugu soo noqdaan si ay u qaataan iibsi kale oo halkaa ka jira.Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, marka laga reebo ugu badnaan RPC, Amazon ayaa tixgelinaya macaamiisha sidoo kale. Waxay micnaheedu tahay in marka la isu soo saaro shey gaar ah, Amazon waxay isticmaashaa ma ahan oo keliya heerarka dhabta ah ee isbedelka, laakiin sidoo kale qiimaha la filayo. Si fudud u dhig, Amazon waxay macquul noqon kartaa in la soo jiido, oo la bixinayo qiimaha qiimaha badeecad gaar ah ayaa si weyn uga sarreeya inta ka hadhay waxyaabaha soo-saarka ee la midka ah ee laga arkay suuqa. Xusuusnow, dhamaystirka boggaaga badeecada leh qayb kasta oo weyn oo buuxa oo buuxa waa mid aad u muhiim u ah liiska Amazon algorithm. Sidaas awgeed, waa in aad iska ilaalisid in aad haysatid mid banaan oo banaan ama si buuxda aan loo dhammeystirin. Habkaas, waxaad marwalba heli doontaa fursado fiican oo lagu soo bandhigo dusha sare ee SERP-ga marka codsiga munaasibka ah ee macaamiisha Source .